Rock Imidiya yokuncokola kwiMizuzu engama-30 ngoSuku | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 29, 2013 Douglas Karr
Sinezinto ezininzi ezilandelayo kumajelo eendaba ezentlalo kwaye sabelana kwaye siphendula itoni kubaphulaphuli bethu kumajelo ahlukeneyo entlalontle. Siliqela elincinci, bambalwa abantu, kodwa ndicinga ukuba senza umsebenzi omkhulu wokunceda abafundi bethu imini yonke kwaye siphendule ngexesha elifanelekileyo kubo. Oko kwathiwa… ukuba konke esikwenzileyo kukubeka esweni, siphendule kwaye sabelane kumajelo asekuhlaleni imini yonke andiqinisekanga ukuba siya kuwufumana nawuphi na umsebenzi owenzelwa abathengi bethu! Kwaye ekugqibeleni bahlawula amatyala ajikeleze apha.
Senza oko ngokusebenzisa ingqokelela yezixhobo ezikhulu. Sesinye sezizathu zokuba ndikuthande ukubhala le bhlog. Ukufunyanwa kwezixhobo ezingabizi kakhulu ezinceda inkampani yethu ukuba ibeke iliso, iphendule kwaye ikhulise abaphulaphuli bethu ngoyena ndoqo kwintengiso yethu nakwimpumelelo yemidiya yoluntu.
Isicwangciso esiphumelelayo seendaba zosasazo malunga nokusebenza ngobukrelekrele, hayi nzima. Ngaphandle kokuba uyinkampani yenqanaba lamashishini, yonke into oyifunayo uyinyikima ngokwenyani kwimidiya yakho yimizuzu engama-30 ngosuku. Ngezixhobo ezizenzekelayo ezinje ngePardot ukukhathalela uninzi lwexesha elichithayo neliphindaphindayo, yonke into oyifunayo sisicwangciso semihla ngemihla kunye nokuziphatha. Ukusuka kwi-infographic kaPardot engezantsi, I-Rock Media yezeNtlalontle kwimizuzu engama-30 ngosuku.
tags: Isicwangciso semizuzu engama-30uxoleloukuxolela oomatshini abazisebenzelayoisicwangciso semidiya yoluntu